Izinzuzo Zamakhamera Omzimba Wezimboni | Izixazululo ze-OMG
Ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba kwaqala ngomnyango wamaphoyisa, kunesidingo sokubheka izikhalazo eziningi ezazivela kwizakhamizi. Uhulumeni wayenesidingo esikhulu sokwazi ukuthi yiziphi izikhulu ezazisebenza. Lezi zilethe ikhamera egqoke umzimba ukuze ibe khona, zingamakhamera kuphela agqoke umzimba ongasetshenziswa ukubona noma yini umuntu ayenza ngasikhathi. Lokhu kube wusizo kakhulu emaphoyiseni ikakhulukazi ngenkathi esemsebenzini, ukufakwa kohlelo kube wusizo impela njengoba kusize ekunciphiseni izikhalazo ebezikhona mayelana nokusebenzisa ngokungafanele amandla nokuziphatha okungajwayelekile phakathi kwamaphoyisa. Eminyakeni edlule, eminye imikhakha iqale ukusebenzisa ikhamera yomzimba ezinhlelweni zayo zokusebenza. Kukholakala ukuthi njengoba nje kusize umnyango wamaphoyisa kakhulu, kungabasiza nasezindlela ezinkulu njengoba sithuthukela esizukulwaneni esilandelayo semisebenzi yezimboni. Eminye imikhakha lapho isetshenziswa yilena:
Amandla kagesi, igesi kanye neenkonzo zokuhlanzeka
Ezezimali, umshuwalense kanye nezezakhiwo
Ezolimo: Umkhakha wezolimo uthuthuka ngezinga elikhulu kakhulu kanti imishini ehlukahlukene iyaguqulwa. Ngesikhathi besepulazini, izisebenzi ezigqoka ikhamera yomzimba zingaqopha imisebenzi yazo yansuku zonke futhi zinikeze neso elengeziwe elizofakazela umsebenzi abathi benziwa zona. Kungahle kusetshenziswe ngabasebenzi abaphuza izinkomo, abasebenzi abaqoqa amaqanda ngisho nokuvuna okwenziwa ngesandla okungabandakanyi ukusetshenziswa kogandaganda. Ukuba nekhamera yomzimba nakanjani kuzokwenza ukuqapha okuningi epulazini kube lula kakhulu. Futhi kuzokwenza ubufakazi buqinisekiseke, ezimweni lapho izinto zilahleka noma isivuno sincane kakhulu kunalokho obekulindelwe. Ngenkathi isisebenzi sikhombisa izilwane ezithengiswayo mhlawumbe, kungaba kuhle ukuba nekhamera egqoke umzimba ezokwenza ukuthi ukubonwa kwesilwane kubonakale ukuze kubonakale ukubukeka kwaso noma ukufundisa ngokukhetha kwemfuyo okufanele ikhethwe. Kwabasebenzi abashayela ogandaganda, ukuba nekhamera yomzimba kungasiza ukwazi ukuthi bangakanani abalima futhi basebenza kahle kangakanani emsebenzini wabo. Ngenkathi konke lokhu kufakiwe, kubalulekile ukuthi kube negumbi leseva lapho konke lokhu kungabonakala noma kuqondaniswe ngesikhathi sangempela. Ingagcinwa futhi kube ngubufakazi noma nini lapho kunesidingo sokuthola unswinyo noma isisebenzi. Ukuba nezokuphepha epulazini ukugqoka amakhamera omzimba kungakhulisa nezokuphepha epulazini, okwenza sikwazi ukubona wonke umuntu ongena ephuma ngamasango. Ikhamera egqoke umzimba ingathathela ibhizinisi lezolimo esigabeni esilandelayo.
Ukumayini: Ukuhlomisa abasebenzi embonini yezokumbiwa phansi kubabeka kwelinye izinga, kwenza ukuxhumana kanye nokusabalalisa kwemiyalo kwenzeke. Kwenza ukuphathwa kwamaphrojekthi okukude kwenzeke kakhulu njengoba ungaba kude kakhulu, kepha kodwa uhlele abasebenzi bakho ubanikeze imininingwane yokufundiswa ngalokho okudingeka kwenziwe nokuthi kufanele wenziwe kanjani. Ngenkathi kwamukelwa uhlelo lwekhamera yomzimba kukhona ukwehla kwezindleko zokuhamba njengoba ungadingi ukuthi uhlale uhla ubheke phansi ukuze ubhekwe nemibiko, uthola ukubona ukuthi kwenziwa ini njengoba kwenziwa. Ngekhamera esetshenziswayo lapho kwenziwa umsebenzi kukhona ukwanda okukhulu ekusebenzeni kahle kwesisebenzi, bazi kahle ukuthi bonke bayaqashwa kanti nokufakwa kwabo umsebenzi kubhekwe lapho, wonke umuntu uzoba nentshisekelo ngokunikela ngokusemandleni abo emsebenzini wabo. Ezokuphepha zangempela ziyathuthukiswa njengoba izisebenzi zingaxwayiswa ngezingozi ezingenzekayo eziqashelwa yilabo abasebenzayo, nazo ziyahanjelwa kalula njengoba ukuhlelwa kokwelashwa kungenziwa ngokushesha okukhulu. Ngefomu levidiyo ebukhoma eliqalisiwe nomsindo we-2-way lapho ababukeli nesisebenzi bekwazi ukuxhumana, ukuxhumana kubaluleke kakhulu futhi kungasindisa ingcindezi eningi ukuvimbela umonakalo omkhulu obekungenziwa. Ividiyo ibiza izithombe eziyinkulungwane, okukhona okuvela kukhamera yomzimba ongayivikela:
Izingxabano zokulethwa kwezinto
Ukwakhiwa: ukuba nabasebenzi ezinsizeni zokwakha nganoma iyiphi indlela, ungabenza benze umsebenzi othile ojwayelekile ngenkathi ukubhekwa kwendawo ezungezile kanye nobungozi bayo kungashiywa eqenjini elibhekele. Uma kwenzeka ingozi eyenzeka kakhulu kumasayithi okwakha isitebhisi kungasetshenziswa ukusula izinto phezulu. Lokhu kungafaka ukubheka ukuthi ngabe bayayilandela yini imigomo nemigomo yokuphepha noma ngabe bayanaka yini lapho kwenzeka ingozi. Ukuba nabasebenzi bafake ikhamera egqoke umzimba kungasiza ukuphepha kwendawo, kwenza ukuxhumana phakathi kweqembu lezokuphepha nomsebenzi wezokwakha kusheshe futhi kube namandla. Futhi, abezokuphepha endaweni yokwakha bazothola ikhamera yomzimba njengewusizo kakhulu, ngoba bazokwazi ukubika ngokuqondile noma ngubani ongena kule ndawo futhi bahlole ukuthi ngabe banokugunyazwa yini ukwenza kanjalo. Le ngenye indlela eqinisekile yokuthuthukisa ukuphepha kwesiza. Uma kwenzeka ingozi enkulu, i-footage evela kwikhamera ye-bodywork ingasetshenziswa ukuphenya ngalokho obekumele kwenzeke, ukudlala i-footage kungamane kuchaze enhlanganweni ukuthi ingozi yenzeke kanjani. Ngamakhamera we-lens anamandla, izithombe ezisezingeni eliphakeme kakhulu zingasuswa ezindaweni ezithile kakhulu kusakhiwo futhi zisetshenziselwe ukuqinisekisa noma ukuchaza.
Ukukhiqiza: ngenkathi kubaluleke kakhulu ukuthi embonini yokukhiqiza yonke imikhiqizo / okuhle okwenziwe kufanele kube ngokuya ngezinga elinikeziwe. Kunokukhubazeka nxazonke, kubaluleke kakhulu ukuthi umkhiqizo lapho umbhangqwana ndawonye ubonwa futhi ugadiwe. Kubalulekile futhi ukuthi embonini ebandakanya ukuhlanganiswa kwezingxenye, zonke zihlanganiswe kahle futhi zonke ziyahlangabezana nezinga. Ukuba nekhamera egqoke umzimba kwenza kube nokwenzeka kakhulu ukuhlola nokuqinisekisa ukuthi wonke umkhiqizo owodwa owenziwayo, ziyafana namazinga wokukhiqiza wenkampani nokuthi amaphutha ancishiswa abe mancane. Ikhamera yomzimba nayo ibalulekile ngoba uma kwenzeka ingozi lapho kwenzeka izehlakalo ezithile futhi abaphathi kufanele bathathe umthwalo wemfanelo, izithombe zevidiyo ezivela kulesi sigameko zingakhishwa futhi zisetshenziselwe ukulungisa izinto. Ukubona ividiyo efana nobufakazi besisebenzi kukhuthaza ngokushesha ekuthatheni umthwalo nasekuxazululeni. Ikhamera yomzimba izovumela abasebenzi abasebenza ekuphathweni ukuthi bakwazi ukubona ukuthi umsebenzi ngamunye wenzani. Ngokuqapha ngale ndlela, kuba lula ngisho nokwenza ukuhlolwa kwabasebenzi ukuxosha abavilaphayo nabangaqondile lapho kukhuthazwa futhi kukhushulwa umholo wababucayi. Lapho abasebenzi sebazi ukuthi babhekiwe, kudala lokhu kuqwashiswa okubashukumisela ukuthi benze njalo kangcono ngenkathi bezinikela emsebenzini. Iyanciphisa ukuyekethisa futhi ikhuthaze ukusebenza kanzima ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kahle.
Ezokuthutha: Imboni yezokuhamba yaziwa ukuthi isebenzisa amakhamera ukuqapha abashayeli kwesinye isikhathi manje, basebenzisa futhi i-GPS ukulandelela ukuhamba kwezimpahla nendawo yabashayeli bazo abasebenzisa insizakalo yabo yokushayela kwezohwebo. Amakhamera agqokwa ngomzimba angasetshenziswa abashayeli bamaloli, amatekisi ngisho nezindiza zezindiza kanye nezinduna zasolwandle. Ukuba namakhamera womzimba kubashayeli ikakhulukazi kusebenza kakhulu, bangaqashwa ukuze bazi uma belalela imithetho yomgwaqo futhi behambisana nemithetho nemithetho. Kwenza kube lula ukuphawula abashayeli abanephutha futhi ubaphose. Iningi labashayeli bamaloli baphuza ngenkathi beshayela, bagcina sebedakiwe ekugcineni okwenza ingozi enkulu yengozi icekela phansi inkampani abayisebenzela izimpahla. Izindiza zomoya endizeni zingenziwa ukuba zigqoke amakhamera agqokwa ngomzimba ukuze zazi futhi zihlole lezo ezindiza endizeni ethile yomoya. Nge-software yokubona ubuso, kuba lula ukulandelela izigebengu okungenzeka ukuthi zigibela ibhasi noma indiza. Ungahlehlela kabusha uhambo oluthize ngendlela oyazi ngayo ukuthi umshayeli uyaphi, abanye abashayeli bayama kuyo yonke indawo ngezizathu eziningi ezingenamsebenzi, ngekhamera yomzimba uzokwazi ukubona ukuhamba kwabo futhi ubheke imisebenzi yabo engahle ithikameze umsebenzi wabo .
Ukuxhumana: Umkhakha wezokuxhumana kungenzeka ube ngumkhakha odinga kakhulu ikhamera yomzimba, imininingwane ibaluleke kakhulu yize ibilokhu ikhona kepha manje seyibaluleke kakhulu. Embonini yezokuxhumana lapho ukuxhumana kwethu nabantu kudluliswa khona kulungiswa, kubalulekile ukuthi babhekelwe ikakhulukazi ukusebenza kahle. Ukuba namakhamera kuwo kusiza ukwazi ukuthi benzani, kwenza ukuthi kubhekwe indlela yabo yokuxazulula inkinga yokuxhumana lapho kwenziwa ucingo. Kwenza futhi kube lula ukubona ukuthi yini onjiniyela besayithi abakwenzayo-ikakhulukazi uma bezama ukulinganisa idivaysi. Lapho imiyalo inikezwa isendaweni ekude ngosizo lwekhamera yomzimba, kuba lula ukubona ukuthi lolu lwazi luyalandelwa yini kuleyo ncwadi noma alunakwa. Njengoba amakhamera omzimba evuliwe futhi esebenza imizamo ehlanganyelwe ingenziwa uchwepheshe hhayi enkundleni njengoba eqondisa unjiniyela wasensimini ukuxazulula izinkinga ezithile zamadivayisi okuxhumana. Ukuphuthuma ekuxazululeni inkinga kuhle kakhulu njengoba inkinga isheshe ifinyeleleke kulokho kwaneliseka kakhulu uhlelo nokuzethemba. Kodwa-ke, kuhle ukuqaphela ukuthi kwesinye isikhathi amakhamera agqokwa ngomzimba angahle angacaci kahle izinto, kwesinye isikhathi kungadinga ikhamera engaphezu kweyodwa ukwenza uphenyo oluphelele ngendaba ethile.
Ugesi, igesi kanye nensizakalo yokuhlanzeka: ukuba nekhamera egqoke umzimba ngenkathi isebenzisa isigxobo sikagesi noma mhlawumbe inethiwekhi kungasizuzisa kakhulu, ngale ndlela kungenzeka kulokho okwenziwa yilolu uchwepheshe ngesikhathi sangempela futhi nokumlungisa lapho enza amaphutha. Kubaluleke kakhulu ukukwazi ukuxhumana nabasebenzi njengoba besebenza bebheka umsebenzi wabo futhi bethola isibuyekezo ngentuthuko yabo. Embonini kagesi, endaweni yokufaka enamakhamera omzimba kungasiza ukuqapha uma abasebenzi besebenzisa izimiso zokuphepha futhi bengazami isenzo sobugebengu. Endaweni okuthengiswa kuyo kwezinye izindawo abasebenzi abathengisa izimakethe zerhasi bangenziwa basebenzise amakhamera omzimba ukusiza ukwazi ukuthi bangakanani abathengisa futhi uma ukuthengisa okwenziwe kuvidiyo kufana nombiko wokuthengisa owethulwe njalo. Izinsizakalo zokuhlanzeka zihlobene nokuthuthwa kwendle kanye nabasebenzi bezokuhlanzeka abathola le misebenzi, besebenzisa ikhamera yomzimba okugqokwa kuyo kuba lula kakhulu ukubona ukuthi wumsebenzi omningi kangakanani owenziwayo nokuthi kungakanani umzamo owenziwayo ekwenzeni umphakathi uhlanzeke futhi uhlanze. Ngamakhamera abasebenzi banganquma kalula ukuthi ngubani osebenza kahle ukuvumelana nezidingo zabo nokuthi ukubukeka kwakhe akuvamisile.
Ukuhweba okuphelele: kuyo yonke imboni yezentengiso lapho kuvame ukuba namabhokisi amaningi nokuhanjiswa kwabaphakeli endaweni ehlukahlukene lapho beceliwe, kubaluleke kakhulu ukuthi kunokubhekisisa izisebenzi njengoba izimoto zingahle zilahleke uma ukunakwa kungakhokhelwa. imisebenzi eyenzekayo. Ukwamukela uhlelo lwekhamera egqoke umzimba kungabonakala njengesinyathelo esidingekayo ohlangothini olufanele njengoba kwenzeka ukubona ukuthi yini abasebenzi abachitha isikhathi sabo bekwenza. Ukuba nekhamera yomzimba kuvame ukunciphisa ukwehla futhi kunalokho kwakha umuzwa wokuqwashisa abagcina ezinzwaneni zabo. Lolu uhlobo lomoya wonke umsebenzi angaluthanda, ngamakhamera abasebenza kuwo omzimba bazobe bengavamisile ukweba noma ngisho nokwenza ubugebengu baluphi uhlobo emsebenzini. Ezokuphepha nazo zinengxenye okufanele zidlale ohlelweni olukhulu njengoba zizofakelwa amakhamera, anikezwe igunya lokuhlola wonke umuntu ongena ephuma nomkhakha. Ngenkathi ucela imvume futhi ebheka ukuthi yini izimoto ezihamba zishiya, zinendima ebaluleke kakhulu okufanele idlale maqondana nokunciphisa ukweba. Kubalulekile labo abasesikhungweni sokulawula nokufinyelela lapho amavidiyo nama-video abonakala khona njengokuqoshwa noma ngesikhathi sangempela, abantu abanolwazi kakhulu futhi bangaqonda kakhulu zonke izimo ngenkathi behlulela izimo.
Ukuthengisa okuthengiswayo: njengokuhweba okuphelele, ukuhweba okuthengiswayo kudinga ukuqapha nokunakwa okuningi. Ukuba ne-CCTV kungenzeka kungabi yizindawo ezanele zokusula izinto phezulu, ukuba namakhamera omzimba kunikeza amandla okubona okwenziwa ngumthengisi wakho. Ukuba nekhamera ngokwayo ngokwemvelo kwandisa izinga lokuqwashisa, yingakho yenza isisebenzi ukuthi sihambisane nemithetho nemigomo yenhlangano. Abasebenzi behla kancane futhi ngeke bakwazi ukuntshontsha, ikhamera yomzimba iyasiza nokuqinisekisa ukuthi inani lamakhasimende kuvidiyo ahambisana nombiko wokuthengisa. Lapho kunamacala okulahleka kwemali noma engafakwanga imikhiqizo, enye yezindawo ezinhle kakhulu zokuqalisa uphenyo i-body cam footage. Nge-stamp yesikhathi kuvidiyo, kungenzeka ukulandelela idethi lapho umkhiqizo othile wathengiswa khona futhi uthole ukuthi empeleni kwenzekani. Ezimweni zokulahleka kwemali, ngekhamera yomzimba, kuzokhonjiswa esikrinini lapho umuntu othile ebamba ukuphathwa kwemali yakhe. Ngobufakazi obunjengalezi, Kungenzeka kakhulu ukudonsa nokubopha abantu abanjalo. Ngobufakazi ozobe ubunikeza kungaba yindaba elula ukubuxazulula.
Ezezimali, Umshuwalense kanye nezezakhiwo: emkhakheni wamabhange nowezimali lapho kunokungena okuningi nokuphuma kwemali, abantu bathambekele ekuthini bathambekele ekugcineni okunye. Lokhu akulungile futhi kusolwa kakhulu, ukubala noma ukuphatha imali akukuniki lungelo. Ukuba nekhamera egqokwa ngumzimba ezimweni ezinjengalezi kungakhombisa ukusebenza kahle kakhulu njengoba kungekho noyedwa ozozama ukweba imali lapho imisebenzi yabo ibonakala. Umkhakha womshuwalense ubhekana nokuqinisekisa izakhiwo, izimpahla kanye nokuphila. Ikhamera yomzimba ingasetshenziswa ngama-ejenti ngenkathi isebenza futhi ingabuyekezwa ukuze ihlolwe. Amavidiyo asuka kumavidiyo awo angasetshenziswa njengezingxenye zesipiliyoni ezingasetshenziselwa imfundo yakamuva. Bangenza amaphutha kwinqubomgomo yabo yomshuwalense noma indlela, kepha kubalulekile ukuthi bafunde kulawo maphutha futhi babe ngcono. Ukuphathwa kwezakhiwo kusebenza kakhulu ekuthengisweni kwezwe nempahla, kungahle kusetshenziselwe ukuthola izithombe noma izithombe zendawo ethile ezingathunyelwa kwi-ejensi ukuze ihlolwe. Ukuphathwa kwezakhiwo kubangcono ngekhamera egqoke umzimba yize ukwenza noma yimuphi umsebenzi wangempela futhi obalulekile uzodinga ikhamera enamandla kakhulu ukwenza umsebenzi wenziwe kahle. Njengoba izithombe zencazelo ephezulu kakhulu zisetshenziswa futhi zidingeka ekuphathweni kwezezakhiwo kubalulekile ukuthi kusetshenziswe ikhamera yohlobo lwensimu enamandla kakhulu.
Manje njengoba yonke le mikhakha ichazwe kafushane futhi manje sesiyazi ukuthi amakhamera agqokwa ngumzimba angabaluleka kangakanani. Ukusebenza kwabo nokuthi basebenza kahle kangakanani kwizimboni zethu kumele kube yizona zinto ezibalulekile ezidingidwayo. With konke lokhu uthe kubalulekile ukuthi sazi inkinga evame kakhulu ngamakhamera kumele igwenywe. Indaba yobumfihlo iyinkinga enkulu ngamakhamera ngokuvamile, uma ngabe usebenzisa ikhamera yomzimba kubaluleke kakhulu ukuthi ulandele imithetho yezwe ephathelene nayo. Kubalulekile futhi ukuthi uma uqopha abantu kumele baqaphele ngokwenzekayo. Akulungile ukuqopha abantu ngaphandle kolwazi lwabo. Uma uqopha futhi isakhamuzi sicela ukuthi uyeke kubaluleke kakhulu ukuthi wenze noma ungaquliswa amacala athile wokubala. Lapho abaqashi bekhetha ukusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba kubalulekile ukuthi abasebenzi baziswe, kumele bavume futhi basayine lapho futhi kufanele baqeqeshelwe ukuthi bangayisebenzisa kanjani njengabaqeqeshiwe.
Abagxeki baveze izingqinamba eziningi ezinemiphumela eyinkimbinkimbi efaka ubumfihlo bezakhamizi, ukufinyelela kumarekhodi angasese kanye nokuqoshwa kwenani labantu abasengozini ie izingane. Lezi yizinkinga abagxeki abakhomba kuzo njengezingqinamba ezivela ekusetshenzisweni kwamakhamera agqokwa ngomzimba emphakathini. Ngenxa yalokhu abenzeli bezomthetho banikeza ukuqeqeshwa okuqinile futhi banemithetho nezinqubomgomo eziphathelene nokusetshenziswa kwamakhamera ukugwema ukungena ezinkingeni ngenkathi bezama ukuxazulula eyodwa. Kepha kubasebenzisi abazimele abangafuna ukusebenzisa le mishini efanayo, kubalulekile ukuthi bazi ukuthi imithetho yobumfihlo kufanele ilandelwe.
Ukuzazisa: lokhu kufaka ukuqaphela ukuthi ubukelwe, lokhu kwaziwa nangokuthi Ukuzazisa komuntu ngenhloso. Ukwaziswa kuvame ukwanda lapho umuntu ebona ukuthi ubhekwe. Ukuguqulwa kokuziphatha kwenzeka futhi kukhona ushintsho ekuziphatheni okwamukelekayo emphakathini, ngalokhu kufakazelwa ukuthi noma yini eyenza umuntu agxile ekuziboneni kwabo ngokuvamile ikhulisa ukuzazi. Ikhamera egqokwa ngomzimba ingenye yezindlela eziningi zokwandisa ukuzizwa kwabantu nokwenza ukuba bazi ukuthi izenzo zabo ziyabukwa futhi ziyaqoshwa. Le ndlela yokubenza banciphise ukwenza okungalungile futhi ukona umthetho. Ukuzazi kuyinto esemqoka eyakhelwa kuyo, uma umuntu azi ukuthi ayaqoshwa enza ngokwemvelo enze okulungile futhi ashintshe ekuziphatheni kwawo okuhle.
Isincomo sokusetshenziswa kobuchwepheshe
Isincomo sobuchwepheshe bokusetshenziswa yilesi:
Uhlelo lwekhamera kumele lube newaranti yonyaka owodwa kunoma iyiphi inkampani ethengwe kuyo
Ikhamera kufanele ibe nesilungiselelo esithile sokukhanya okuphansi esivumela ukuqoshwa okulula ngisho nalapho kungekho kukhanya
Izinzuzo Zamakhamera Omzimba Omboni igcine ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4202 Ukubuka kwe-1 Namuhla